Taratasy fiangaviana an'i Amazon, fampiatoana ny kaonty mpivarotra, drafitr'asa
Ny Amazon Appeal Consultant anao
Ahoana ny fomba hanoratanao taratasy mahomby amin'ny fampiharana any Amazon?
Manomboha Live Chat miaraka aminay fotsiny izao na fenoy ny endrika fangatahana an-tserasera eto ambany miaraka amin'ny antsipirihanao ary avy eo afaka miverina ao anatin'ny adiny iray ny mpanolo-tsaina anay. Mifandraisa aminay ho an'ny taratasy fangatahana fampiatoana Amazon Suspension.
Jereo ny serivisinay
Fantaro ny antony nampiatoana ny kaonty mpivarotra Amazon!
Ny fahalalana ny antony fampiatoana kaonty no dingana voalohany mankany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty. Ny fitiliana ny olana dia mitaky fahalalan'ny manam-pahaizana manokana momba ilay saha. Ny manam-pahaizana momba ny kaonty mpivarotra anay dia hanampy anao hahita ny antony mahatonga ny fampiatoana anao ary hanazava ny fomba ahafahanay manampy anao hanoratra lafatra Taratasy fampakarana Amazon. Mifandraisa aminay izao ary alao ny ASAPanao.
Misokatra 24 ora isan'andro izahay, 7 andro isan-kerinandro.
Mamandrika hevitra amin'ny consultation maimaimpoana
Hiverina ao anatin'ny 1 ora ny consultants
Ahoana no ahafahako misoroka izany fampiatoana izany amin'ny ho avy?
Mila mieritreritra tsara momba izany ianao hoe ahoana no hisorohana izany tsy hitranga intsony amin'ny ho avy. Manantena i Amazon fa tokony hanatanteraka drafitra hetsika ianao ary indraindray dia hamerina ny kaonty Amazon Seller anao izy ireo raha vao azonao atao ny manatanteraka ny drafitry ny asanao.
Raha mila fanampiana ianao hanintonana ny kaonty mpivarotra Amazon anao, na amin'ny lafiny iray hafa raha tianao ho hitanao hoe inona ny olana mety hamerenanao azy dia afaka manampy izahay. Miresaha amin'ny iray amin'ireo solontenanay mba hihainoana hevitra maimaimpoana sy hevitry ny manam-pahaizana momba ny raharaham-pitsaranao.
Azonao atao ihany koa ny manampy anao amin'ny fisintomana raha tsy mandeha ny lisitry ny lisitra misy anao ary raha misy ny fandikan-dalàna mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny kaontinao! Miresaha amin'ny iray amin'ireo solontenan'ny fikarohanay mpanjifa hahazoana consultation maimaimpoana.
avereno averina ao anatin'ny 24 ora ny kaonty Amazon anao naato
Na dia maharitra fotoana fohy aza ny fampiatoana ny kaonty mpivarotra amazonanao, ny famerenana ilay kaonty dia mety ho fotoana maharitra. Indraindray, io fotoana io dia nitarina noho ny lesoka sasany etsy sy eroa nataon'ny mpivarotra noho ny antony maro samihafa toy ny tsy mazava amin'ny politikan'i Amazon, tsy ahafahana mamantatra ny olana ao ambadiky Fampiatoana ny kaonty Amazon, na tsy mahay manoratra taratasy fangatahana fampiatoana fampiatoana Amazon sy matihanina. Fantatsika tsara kokoa ireo olana ireo noho ny olona rehetra ary izany no antoky ny serivisy kalitao amin'ny fotoana haingana indrindra.
Aplus Global eCommerce dia vahaolana maharitra hiatoana amin'ny famahana tanteraka ny filanao Appeal ary maro hafa. Ny fotoana dia afaka manomboka amin'ny 24 ora ka hatramin'ny 72 ora arakaraka ny fahasarotan'ny olana.
Ahoana no fomba famoahana ny kaontiko Amazon?
Ny fanakaramana olona iray dia mety nefa azonao atao ny mijery ny fampandrenesana nalefan'i Amazon, ary manana drafitra asa. Ireo no votoatin'ny fampakarana mendrika.
Maharitra hafiriana ny fanoratana taratasy fampakarana fampiatoana?
Ny fotoana fohy indrindra ilaina amin'ny fanoratana antso dia 24 ora. Ity vanim-potoana ity dia mety hitombo hatramin'ny 3-4 andro fiasana araka ny antsipirian'ny kaonty Amazon iray mihantona sy ny karazana serivisy nangatahan'ny mpivarotra.
Inona no azonao atao hamerenana amin'ny laoniny ny kaonty mpivarotra Amazoniko?
Misy serivisy sy fonosana isan-karazany omenay hamerenana ny kaonty mpivarotra Amazon. Manome consultancy, fanolorana taratasy fampandrenesana Amazon ary serivisy fanarahan-dia izahay; miankina amin'ny karazana fonosana nofidinao.
Efa niasa tamin'ny tranga fampiatoana an'ny Amazon Seller ve ianao?
Eny, niara-niasa tamina tranga maro samihafa mifandraika amin'izany izahay Fampiatoana ny kaonty Amazon. Ary koa, manana ekipa veterana iray amin'ity sehatra ity izahay.
Ahoana raha mangataka fampahalalana bebe kokoa i Amazon?
Izahay dia miatrika ny antso mandra-pahatongany any amin'ny tanjony - dia ny famerenana amin'ny laoniny. Rehefa avy nanasazy anao indray mandeha monja izahay dia miasa amin'ny dingana kely tsirairay amin'ilay dingana mandra-pandamin'ny olana rehetra.
Azo antoka ve ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty?
izahay, amin'ny maha mpiara-miasa anao, dia manome ny famakafakana tsara indrindra ary manao antso amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty mpivarotra amnona mihantona. Tsy azontsika fehezina anefa ny faran'ny Amazon sy ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty dia tsy azo antoka 100%. Na izany aza, mitazona taham-pahombiazana mihoatra ny 98% izahay mandraka ankehitriny.
Manome antoka ara-bola ve izahay?
Tsy dia manadino vola-miverina amin'ny laoniny isika, saingy mety misy fepetra vaovao izay heverintsika. Raha mila fanazavana fanampiny, vakio ny politikan'ny famerenam-bola anay.
Inona ny tahan'ny fahombiazanao raha ny momba ny Seranan'i Amazon Appeal?
Soa ihany, mandra-pahatongantsika izao dia mitazona taham-pahombiazana avo kokoa na mitovy amin'ny 98%. Nanao zavatra tsara izahay ary manana tahan'ny fitazonana mpanjifa 90% ihany koa noho ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Taratasy fampakarana ny Amazon Amazon
Nofoanana ny kaonty mpivarotra ahy tany Amazon, ka nifandray tamin'i A Plus Global Amazon aho mba hanampiako ahy hanoratra drafi-pandraisana andraikitra hampiantsoana ilay fanidiana. Ny antso izay nosoratan'izy ireo ho ahy dia feno, lava... natokana ho an'ny kaontiko aho ary niresaka olana manokana efa niainako talohan'ny famonoana ahy. Amin'ny ankapobeny, traikefa tsara dia tsara izy ireo ary nitety ahy nandritra ny fizotran-kevitra mba hamerenana ny kaontiko. Vao avy navitrika aho roa andro lasa izay! Tena miasa tokoa ny serivisin'izy ireo!hamaky bebe kokoa
Rehefa avy niantso ny antso nataoko manokana aho dia mandefa POA 4-5 ary tsy misy vintana. Nieritreritra ara-bakiteny ny hanao kaonty Amazon vaovao aho satria tsy afaka mamerina ny kaontiko. Aza adino, mbola manana vola mihidy aho... miaraka amin'i Amazon ary tsy hamaly ny iray amin'ireo antso nataoko izy ireo. (miaraka amin'ilay mailaka manao hoe: "Mety tsy hamaly amin'ny mailaka hafa momba an'ity olana ity izahay"). Rehefa nahazo ny tolo-kevitra avy amin'ny olona iray izay nampiasa an'ity orinasa ity aho dia nanapa-kevitra ny hiaraka amin'izy ireo. Nanao risika aho ary nilaza fa na mandoa azy ireo aho ary mamerina miasa ny kaontiko ary miverina ihany koa ny volako na mandoa azy ireo aho ary very vola ary very koa ny kaontiko miaraka amin'ireo vola. Aorian'ny fampiatoana 2 volana dia nandoa izany aho orinasa hanampy ahy hamerina ny kaontiko. Mandefa POA ara-bakiteny izy ireo ary ny ampitso dia nahazo mailaka aho nanao hoe "Namboarina indray ny kaontinao Amazon" Asa vita tsara ary tena mamporisika ny Aplus Global aho! Raha tianao ny hamerenana na hanavao ny kaontinao dia aza manao fahadisoana mitovy amin'izany aho nanao. Makà matihanina hanoratra POA ho anao.hamaky bebe kokoa
09:27 29 Mey 21
Tsara amin'ny zavatra ataony izy ireo. Nampiasako izy ireo mba hananganana ny kaonty mpivarotra Amazonako, ary naharitra elaela izany, saingy tsy kivy tamin'ny kaonty mihitsy izy ireo. Nanoratra antso ho ahy izy ireo mandra-pahatongako... namelombelona indray. Ny famerenako dia naharitra roa volana sy sasany teo ho eo, saingy manana namana iray izay nampiasa an'io serivisy io koa aho ary namerina ny kaontiny tao anatin'ny roa andro monja. Mamporisika mafy!hamaky bebe kokoa
08:26 05 Mey 21
Faly be aho miara-miasa amin'izy ireo. Serivisy haingana be ary ny taratasy fampiakarana azy ireo dia mahatalanjona. Fantatr'ireto tovolahy ireto izay tadiavin'i amazona. Misaotra anao!!
11:07 03 Mey 21
Niara-niasa tamin'ity orinasa ity mihoatra ny kaonty 100 aho ary naverin'izy ireo indray ny ankamaroan'izy ireo. Tena tsara izy ireo dia manome serivisy fitarainana any amin'ny fohy. Hanohy hiara-miasa amin'izy ireo aho.
06:17 03 Mey 21
Salama! Te hilaza aminao aho: navaozina ny kaontiko! Misaotra betsaka amin'ny fanampianao! Hahatsiaro anao aho.
Ny tsara indrindra amin'ny orinasa. Rehefa avy nanakarama ny serivisin'izy ireo ary nandinika izay nataon'izy ireo ho an'ny kaontiko. Mila milaza aho fa mino fa tsy misy zavatra tsy vitan'izy ireo. Ampahafantaro azy ireo amin'izay manana olana... kaonty mpivarotra. Mpandray andraikitra haingana ary vokatra haingana dia haingana!hamaky bebe kokoa
Manoro hevitra an'ity orinasa ity aho hanoratra izay Amazon Appeal Letters satria fantatr'izy ireo izay tadiavin'i Amazon. Nanao fikarohana tamin'ny orinasa hafa aho ary nifidy an'io satria nanokana fotoana hiresahana amiko izy ireo... momba ny kaontiko. Tena nieritreritra aho fa tsy maintsy miandry 90+ miampy andro maromaro hahafahako mamoaka vola ary ajanona aloha ny kaontiko. Misaotra anao APlusGlobal tamin'ny nanoratanao ny taratasiko mahaliana sy matihanina. Manoro hevitra anao aho ny hanakarama olona matihanina amin'ny fotoana voalohany hampiakarana ny raharaha. Ity orinasa ity dia nanampy ahy hanavao ny kaontiko tamin'ny andro nitondrako ny kaontiko niaraka tamin'ny taratasy fampiakarana azy ireo. Izay natokana ho ahy. Misaotra anao nahita asa tsara!hamaky bebe kokoa
Ny olona @ APlus Global Ecommerce dia tena tsara sy manampy tokoa. Nahazo fanaraha-maso ny kaonty feno ary nahazo fahalalana marobe avy amin'izy ireo momba ny fanovana tokony hatao. Ary fantaro hoe, it... nanatsara ny varotra nataoko koahamaky bebe kokoa
APlus Global Ecommerce dia mpanome tolotra lehibe ho an'ny serivisy fampiakarana an'i Amazon. Naverina tamin'ny laoniny tao anatin'ny 72 ora ny kaontiko.
Natolotra tao anatin'ny 2 ora ny APlus Global Ecommerce ary naverin'i Amazon teo noho eo ihany. Ny tsara indrindra. Mendrika isaky ny denaria. Ny torohevitro dia aza mijery ny mari-pahaizana raha mila valiny ianao. Rariny ny asany... tonga lafatra. Rehefa avy nividy ny fifandraisana haingana dia haingana aho, nanana ny antontan-taratasy tao anatin'ny 2 ora aho ary navoaka tao anatin'ny 24 ora ny acoount. Nosakanako ny kaonty nandritra ny 5 volana mahery. Tena mamporisika azy aho.hamaky bebe kokoa
Naverina tamin'ny laoniny 24 ora latsaka ny kaontiko, hatolotro azy amin'ny olona rehetra aho, atsaharo ny fandoavan-doha olona ary mandehana miaraka amin'i ivoara faran'izay mahay manao antso! Misaotra anao indrindra